May Nyane: ဖြန့်ဝေခြင်း
ဒီမှာနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်…. ပထမဆုံးတစ်ချက်က.. နအဖကို အတင်းပြောတာ ပြဿနာမရှိပါဘူး… ဒါပေမယ့်ကိုယ်တိုင်က ဘာလုပ်မလဲ? ဒီမိုအဖွဲ့တွေလဲ ဘာမှလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး.. အဲလို ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ လုံးဝ မမှန်ကန်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်မဆို အခက်အခဲတွေရှိတာချည်းပဲ… ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ propaganda တွေကို သိပ်ပြီးမယုံနဲ့ဗျ… နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ခင်ဗျားလဲသိသာ မဟုတ်ပါဘူး… သိအောင်လဲခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြမှာ မဟုတ်ဘူး.. နည်းနည်းလေး ဦးဏှောက်လေးသုံးပြီး အတင်းပြောစေချင်တယ်ဗျာ….
In search of the hell you might be Kwe Wel Zer(poor dog) who loves to eat the leftover bones of the military dogs.